यीनै हुन लोकप्रिय गायिका अञ्जु पन्तका हुनेवाला श्रीमान , विवाह कहिले हुदै छ होला ? – Onlines Time
January 31, 2021 February 14, 2021 onlinestimeLeaveaComment on यीनै हुन लोकप्रिय गायिका अञ्जु पन्तका हुनेवाला श्रीमान , विवाह कहिले हुदै छ होला ?
अनुसार अञ्जुले थीर कोइरालासँग विवाह गर्न लागेका हुन्।सिंगल’ भएपछि विवाहको प्रश्नले घेरिरहेकी लोकप्रिय गायिका अञ्जुले अब त्यसको सामना गर्नुपर्ने छैन । पत्रकारहरुले विवाहको बारेमा प्रश् गरेर हैरान बनाएपछि पछिल्लो समय छोरीकै दवावका कारण विवाह गर्ने’ बताउँदै आएकी थिइन् ।
विवाहका लागि अञ्जु र थीरको अहिले एक चर्चित बुटिकमा लुगा तयार भइरहेको छ । तर, विवाह कहिले भन्नेचाहिँ कतै बाट खुलेको छैन । गायिका अञ्जुको एक छोरी परितोशिका छिन् परितोशिकाले हालै आफ्नी आमाको एक गीतको भिडियो मा मोडलिङ गरेकी छन् । छोरी परितोशिकाकै करले गर्दा पनि अञ्जु विवाह गर्न बाध्य भएको बताइन्छ ।